Madaxweynaha Kilika Shanaad ee Soomalida oo wareysi dhinacyo badan kaga hadlay | Dayniile.com
Home Warkii Madaxweynaha Kilika Shanaad ee Soomalida oo wareysi dhinacyo badan kaga hadlay
Madaxweynaha Kilika Shanaad ee Soomalida oo wareysi dhinacyo badan kaga hadlay
DHISMAHA XUKUUMADDA CUSUB WARAYSI
Wariye iyo madaxwayne Mustafe Mustafe
Wry= Ugu horeyn mudane madaxwayne waxaan kaaga mahad naqayaa aqbalaada aad naga ogolaatay waraysiga. soo dhawow .
Mdx = Adaa mudan. Waan dhawahay
Wrye :- Mudane madaxwayane saan la socono 20ki Maskaram ama 30-kii September deegaanka Somalida waxa ka qabsoontay doorasho, taasoon cidna idinkula tartamin (xisbiga PP ) marka laga reebo xubo kooban oo Gilli ah . Sida muuqatana guushu waa dhankiina, walow aan wali natiijada la shaacin. Haddaba bulshadu waxay isha ku haysaa caleema saarkaaga kadib , nooca ay noqon doonto xukumadda aad soo dhisi doontaa. Malaga yaaba in ay noqoto mid ka duwan tii hore oo wajiyo cusub lagu arko ?
Mdxwyne :- Waa run doorashadi way qabsoontay , balse lama shaacin natiijada , guul baanan filaynaa. Dhanka dhismaha xukumadda waxaan u dhisi doonna sidaan u aragno in ay bulshada danteedu ku jirto .
Wriye. Mudane ma laga yaaba in wax iska badalo dhanka saami qaybsiga oo reero badani dulmi tabanayaan iyagoo aaminsan in sadbursiimo badani ka jiray, dhismaha xukumaddaadi hore . ?
Mdxwayne:- Waxaan isku dayi doonaa in ay xukumadani noqoto mid caddaalad ku dhisan oo bulshada wada qancisa Insha Allah .
Wariye:- Marka ma waxaad samayn doontaan boosas cusub oo la siiyo dadkan wax tabanaya, mise ku’ ay qaar kale haysteen ayaa looga qaadi doonaa ? Haddii ay ta danbe noqoto see loogu qancin karaa reer in booskii u haystay laga qaado oo cid kale la siiyo, kuwaa laftoodu maanay dulmi sheegan doonin. ?
Madaxwayne :- Qasab maaha in reer walba halkii uu awal hore haystay uu mar kale helo, dhismaha xukumaddana waxaan ku salayn doonaa hebel booskaa maka soo bixi karaa, ee ku salayn mayno ree hebel ayaa booskan lahaan jirey. Awal haddii ay xal ahaan jirtey magacaabistu imika waxay noqon xul iyo yaa ku haboon booska.
Wariye :- Mudane Madaxwayne dadka qaar ayaa aaminsan in ay jiraan koox Wasiiro ah oo agtaada bir-ma’gaydo ka ah kuwaasi oon la taaban karin, lana filayo in ay sidoodi usoo noqdaan iyagoo boosas koodi xanbaarsan ,
Madaxwayne:- Wax bir ma’gaydo la yidhaa siyaasada iyo shaqada dawlada kuma jirto , qof kastana waxa lagu qiimeeya shaqadii loo igmaday sideedi ma uga soo baxay. Markaa kii sideeda u gutay waajibkii la saaray in la soo celiyo danta bulshadaa ku jirta. Midka ka gaabiyayna in la badalaa waa sunaha dawladnimada. Wax waji eeg ahina ma jiarayo.
Wariye :- Dhawaan xukumadda Oromiya markii la dhisayay, waxa ahmiyad la siiyay deegamadii xuduudka iyo mucaaradkii , taada in kooxahaa mudnaan la siiyo ma laga yaaba , oo dadka darafyada oo tabasho badan qabay , wax laga saxo ?
Madaxwayne:- Saan hore kuugu sheegay waxaan xooga saari doonaa in xukumadani noqoto mid bulshada wada qancisa oon cidna wax saluugin. Xaga mucaaradkana marar badan ayaan sheegnay in aan dhisi doono xukumad wadaaga.
Wariye:- Xaga mucaarad aan ku noqdee maanta xibsiga ugu waynee mucaarad ahi waa ONLF . Onlf-na waa laba garab oo mid xagiina lagu tiriyo. Kaad wax siin doontaan waa midkee ? Mase laga yaaba in garabka kale ku qanco haddaad ka idiin dhaw wax siisaan.
Madxwayne:- Taa wakhtigeeda hala gaadho .
Wariye:- Hadmaa laga yaaba in aad soo dhistaan xukumada.
Madaxwayne :- Taasi waxay ku xidhantahay hadba xiliga la shaaciyo natiijada doorashada.
Wariye:- Haye madaxwayne aad baan kaaga mahadnaqayaa wakhtigaaga qaaliga ah eed noo hurtay.
Madaxwayne:- Adigaa mudan .
Previous articleHalkaan ka Daawo soo Afjarida Colaada Dayniile
Next articleXasan Sheekh & Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo ka wada hadlay Arrimaha doorashooyinka
Dowladda Britain ayaa sheegtay in dal ku gal ku meel gaar ah ay siin doonto tiro xaddidan oo shaqaalaha gaadiidka ah oo dalka dibaddiisa...
Farmaajo oo qaabilay wafdi kasocoda Veesha Caalamka
I will design a hand drawn logo and brand identity